Block 13 – Aarthik Samachar
नेप्से घट्यो, विश्लेषक भन्छन्, ‘यो सामान्य करेक्सन हो, आत्तिनुपर्दैन’
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन सोमबार बजारमा दोहोरो अंकको भारी करेक्सन आएको छ। आज बजार ४५.२५ अंकले ओरालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक २७८२.६८ को विन्दुमा झरेको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ६.५८ अंकले घटेर ५००.४७ को विन्दुमा समेटिएको छ। हिजोको तुलनामा कारोबार…
१.५९ % घट्यो नेप्से परिसूचक, करीब १४ अर्बको शेयर कारोबार
जेठ १७, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार सोमवार शेयर बजारमा सोमवार उच्च अंकको करेक्सन भएको छ । आइतवार सर्वाधिक विन्दुसहित सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको शेयर बजारमा यो दिन भने उच्च अंकको करेक्सन भएको हो । यो दिन १ दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् ४५ दशमलव २५ अंकले घटेर नेप्से परिसूचक २…
काठमाण्डौ । बजारको नयाँ प्लेयरको रुपमा उदाएको एनआइसी एशिया बैंक एकपछि अर्को गर्दै खेलबाट बाहिरिन थालेको छ । अघिल्लो वर्ष र यसअघिका त्रैमाससम्म पनि खूद नाफा आर्जन गर्ने बैंकहरुमा टप थ्रीमा आइरहेको यो बैंक अत्यधिक खर्च धान्ने सकसमा पर्दा रिंगबाट क्रमशः बाहिरिन थालेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको…
सुनको भाउ ओरालो लाग्न थाल्यो, आज कतिमा हुँदैछ किनबेच ?
साताको अन्तिम दिन आज शुक्रबार सुनको भाउमा सामान्य गिरावट आएको छ । बिहिबार तोलाको ९२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज तोलामा ५ सय रुपैयाँले घटेर ९१ हजार ७ सयमा झरेको छ । यस्तै तेजाबी सुन पनि तोलामा ५ सयले घटेर ९१ हजार ५ सय रुपैयाँ…
खाली ग्यास सिलिन्डर भरेर राख्न उपभोक्तालाई आग्रह
काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा आपूर्ति प्रभावित हुने भन्दै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आफूसँग भएको खाना पकाउने खाली ग्यास सिलिन्डर भरेर राख्न उपभोक्तासँग आग्रह गरेको छ। एलपी ग्यास सहज तरिकाले आपूर्ति व्यवस्था गर्न नेपाल आयल निगमले बुधबार संघलाई पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुसार संघले उपभोक्तालाई खाली सिलिन्डर…
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन सोमबार बजारमा दोहोरो अंकको भारी करेक्सन आएको छ। आज बजार ४५.२५ अंकले…
जेठ १७, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार सोमवार शेयर बजारमा सोमवार उच्च अंकको करेक्सन भएको छ । आइतवार सर्वाधिक विन्दुसहित…
काठमाण्डौ । बजारको नयाँ प्लेयरको रुपमा उदाएको एनआइसी एशिया बैंक एकपछि अर्को गर्दै खेलबाट बाहिरिन थालेको छ । अघिल्लो वर्ष…
साताको अन्तिम दिन आज शुक्रबार सुनको भाउमा सामान्य गिरावट आएको छ । बिहिबार तोलाको ९२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार…
काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा आपूर्ति प्रभावित हुने भन्दै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आफूसँग भएको खाना पकाउने…
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहकको वित्तीय हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ गुनासो सुनुवाइका लागि नयाँ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले यसका लागि गुनासो ‘डट एनआरबी डट ओआरजी डट एनपी’ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो। राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र…
© Copyright 2021	- Aarthik Samachar. © 2021 Aarthik Samachar. All Rights Reserved.